WAAYIHII WARSAME Q19AAD W/Q: Cali M Diini | Laashin iyo Hal-abuur
Home Curis WAAYIHII WARSAME Q19AAD W/Q: Cali M Diini
WAAYIHII WARSAME Q19AAD W/Q: Cali M Diini
WAAYIHII WARSAME Q19AAD
Warsame hadda gelinka hore ayaa uu waxbartaa gelinka dambana isla iskoolka ayaa uu ka shaqeeyaa. Waaa uu ka raystay qolkii sariirta silliga ahi dhextaallay oo hadda waxa uu deggan fillo qurux badan oo ku taal meel aan iskoolka sidaas uga dheerayn. Fillada bilooyin ka hor ayaa farta laga qaaday, waxaa dhistay Cabdiwaaxid. Waa wax soo saarka Abuu Xaniifa. Warsame waxaa la deggan Sugow iyo Nunow oo ah labo macallin oo iskoolka waxa ka dhiga. Sugow iyo Nuunow, Cabdiwaaxid ayaa ka keenay gobolka soomaalida ee Waqooyi Bari Kenya si ay Abuu Xaniifa macallimiin uga noqdaan.
Warsame waa qofka ugu dambeeyay ee habeenkii ka hoyaada iskoolka oo asaga ayaa xira. Sagaalka habeennimo ayaa fasalka ugu dambeeya laga baxaa inta gabadha nadiifisada ahi fasallada nadiifinayso Warsamana diyaarinayo waxyaabaha fasallada aroortii u baahan yihiin ayaa saacaddu gaaartaa tobanka habeennimo. Marka uu iskoolka xiro waxa uu sii maraa maqaayad yar oo laamiga ku taal, saxan digir ah oo saliid iyo sokor lagu iidaamay ayaa bac qafiif loogu soo ridaa. Marka uu guriga tago waxa uu hor fariistaa dhalo (TV) wayn oo qolka fadhiga taallaa. Cabdiwaaxid ayaa ayaan dhexdaas ah u soo dhigay. Inta badan waxa uu daawadaa kanaalka carabiga ah ee Aljazeera ee Af Carbeedka ku baxa oo inta badan ay ka baxaan warar iyo warbixinno xalaadaha markaas taagan gaar ahaan dagaallada iyo colaadaha ka oogan qaybo badan oo dunida muslimka ah. Daawashada Aljazeera saamayn wayn ayay ku yeelatay Warsame waxa ayna jihaysay aragtiisa dunida muslimka. Waxa uu taageere u noqday kooxo badan oo ka dagaallama dunida Carabta, Afganistaan iyo meelo kale.
Muna waxa ay go’aansatay in Warsame u sheegto in ay jeceshay. Waa go’aan adag oo aysan ogayn waxa ay kala kulmi karto. Warsame waa wiil qalbi wanaagsan oo garasho leh waa uu fahmi doonaa xaaladdayda ayay isku la hadashay Muna. U sheegista in ay jeceshahay Warsame kaliya culus kuma hayso ee waxa ay la’dahay halkii ay ugu sheegi lahayd, ma asaga oo xafiiska jooga ayay u tagtaa oo u sheegtaa? Ma marka nasashada xiisadaha la galo ayay u sheegtaa? Ma gurigiisa ayay ugu tagtaa? Maya in aan gurigiisa ugu tago ma ahan mid dhici karta ayay niyadda iska tiri. In asagu gurigeeda ugu yimaadana rajo kama qabto waayo dhawr goor oo hore ayay ku casuntay in uu jimcada guriga qado u yimaado laakiin Warsame waa uu ka diiday waayo waligiis ma uusan tagin guryaha jaallayaashiisa ay ardayda isla yihiin. Xumaan kama ahayn ee waa u ka xishoon jiray oo taasi waxa ahayd mid ka mid ah dabeecadihiisa la yaabka leh.
Ugu dambayn Muna waxa ay go’aansatay in Warsame u sheegato jacaylka ay u qaadday ayna u tagto marka uu galo nasashada xiisadaha u dhaxaysa. Maadaama ay Muna galabley ahayd Warsame subaxley ahaa waxa ay iskoolka timid subax barqadii waqti ay ogayd in Warsame fasalka ka soo baxay. Waxa ay u timid asaga oo sidii caadadu ahayd fadhiya jardiinka iskoolka. Markii uu arkay ayuu ku yiri “ haye Muna, maanta maxaa jira ma subaxley ayaad noqotay?” maya ma noqon ee adiga ayaan dartaa u imid, ayay ku juwaabtay.
Warsame: haye, walaashay Muna iisheeg ma wax dhib ah baa jira?
Muna: maye abboowe dhib ma jiro ee in aan ku arko kaliya ayaan rabay.
Warsame: Muna, walaashay wax xilligaan ku wadaa wax arag kaliya ma ahane iisheeg maxaa soo siyaaday?
Muna oo gariiraysa hadalkiinna ku dhagay, inta ay faraheeda jucjucisay kadibna faraha is dhaafisay ama isdhexgalisay oo dhabteeda saartay hoosna fiirinaysa ayaa tiri “abboowe wax kale ma ahan ee waxaan rabay in aan kuu sheego wax aan waqti dheer doonayay in aan kuu sheego balse aan awoodi waayay.”
Warsame: Muna aniga waad ogtahay waxa aad ii tahay walaashay oo kale, waxaad tahay qofka aan Gaalkacyo ugu jeclahay, waxba ha iga la cabsan iisheeg waxa jira.
Muna: Warsame, waan ku jeclahay.
Previous articleXASIL OO ILA GARO. (XIKMADO KOOBAN) Qore: Mohamed Musa Sh. Noor
Next articleDIGNIIN IYO DARDAARAN BY: YAXYE CAAMIR